Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao lafo vidy » Sandals Resorts Hawaii? Fialan-tsasatra Karaiba any Hawaii?
Antigua & Barbuda Breaking News • Associations News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana Grenada • Vaovao Mafana Jamaika • Famakiana Vaovao Saint Lucia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
The Nosy Hawaii ary ny azy ireo Karaiba Ny mifanila dia misaraka amin'ny kilometatra an'arivony maro ary koa ny fahasamihafana ara-kolontsaina sasany. Na dia ao Etazonia aza i Hawaii, ny ankamaroan'ny nosy Karaiba dia heverina ho tanjona iraisam-pirenena. Mila pasipaoro nohavaozina ireo mpitsidika mba handehanana any.
Ho an'ny ankamaroan'ny mpitsangatsangana amerikana, ny Karaiba kosa dia midika fotoana fohy amin'ny fivezivezena sy faritry ny fotoana mitovy amin'izany, raha ny manidina mankany Hawaii matetika dia lava kokoa ary ny elanelam-potoana 6 ora eo anelanelan'ny New York sy Honolulu dia mila fanitsiana jet lag.
Any Karaiba, misy fahatsapana ara-kolontsaina hafa tanteraka. Voalohany, tsy maintsy jerena ny fitaomana lehibe ananan'ny nosy voalohany ary mbola ananana. Ireo afrikanina izay nentina tany amin'ny faritra tamin'ny alàlan'ny varotra andevo dia nanampy tamin'ny mozika sy ny sakafo ary ny fitenin'ireo nosy ihany koa. Avy eo, diniho ireo firenena eoropeanina nanjanaka ireo nosy, ary ho hitanao ny antony tsy itovizan'ny nosy tsirairay. Izy rehetra dia miaraka amin'ny mashup sakafo, mozika, fiteny ary kolontsaina izay tena miovaova isaky ny nosy.
Na eo aza izany, tsy natokana ho an'i Jamaika intsony ny mozika Reggae. Hawaii koa dia tia ny Reggae Hawaii - saingy iray ihany i Bob Marley.
Ity misy ny Sandal factor izay mampiavaka ny Karaiba sy Hawaii. Any Hawaii, dia hahita safidy vitsivitsy na tsy dia lehibe loatra; Na izany aza, mora kokoa ny mikarakara tena, miaraka amin'ireo rojom-barotra amerikana mora misy, fa ny miankina amin'ny trano fisakafoanana dia mety ho lafo.
Ny nosy Karaiba dia mazàna manintona olona mitady traikefa an-tsehatra rehetra sy an-dranomasina. Safidy tsara ho an'ny olona tena maniry ny hamongotra mandritra ny fialan-tsasatra ataon'izy ireo.
Any Karaiba, azo tsapain-tanana ny fihodinana milamina. Mazava ho azy, afaka mitady fitsangatsanganana mahafinaritra ianao, toy ny azonao atao mora foana any Hawaii, ary misy tantara marobe any amin'ny nosy tsirairay amin'ny endrika maritrano, toby miaramila, toeram-pivavahana ary marika hafa. Izany dia nilaza fa ny fotoan'ny nosy dia zavatra iray any. Ny Caribbean dia toerana ahafahanao miverina miverina, mankafy ny iray na roa mangatsiaka, ary miala sasatra tokoa nefa tsy mahatsiaro tena ho tsy mahita zavatra ianao.
Sandals Resorts nametraka fenitra ho an'ny fialan-tsasatra nofinofy any Karaiba. Midika izany fa avelao handeha daholo izy rehetra hiala sasatra amin'ny tontolo azo antoka sy mahafinaritra. Midika izany fa milomano amin'ny morontsiraka sasany tsara indrindra, mihinana sakafo mahatalanjona, manao cocktail ary fety raha tianao, na miverina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny na efitranon'ny hotely misy anao.
Misy 15 ny Luxury Sanded Resorts ao amin'ny Caribbean, anisan'izany i Jamaica, The Bahamas, Grenada, Barbados, Antigua, ary Saint Lucia. Samy manolotra fipetrahana eny amoron-dranomasina mahavariana, trano fonenana mahafinaritra sy lafin-javatra maro izay mahatonga ny Sandals Luxury tafiditra® traikefa. Nomena ny marika Hotely Manan-tantara any Karaiba amin'ny World Travel Awards nandritra ny 18 taona nisesy, Sandals Resorts no fenitry ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina am-pitiavana.
tora-pasika dia vondrona fialan-tsasatra ampiasain'ny Sandals.
Ny Resort Beaches voalohany dia nosokafana tamin'ny 1997 ary marika nateraky ny fangatahan'ny mpivady izay tia an'i Sandals Resorts ary te hanana traikefa mitovy hizara amin'ny fianakaviany.
Ankehitriny dia marika tena malala eo amin'ny tsenan'ny fialan-tsasatra feno fianakaviana, rehefa voafidy ho Resort Iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana manerantany nandritra ny 14 taona nisesy, ny Beaches Resorts dia nanangana ny tenany ho toeram-pialan-tsasatra feno finaritra ho an'ny fianakaviana any Karaiba. , manolotra traikefa fialan-tsasatra tsy hay hadinoina ho an'ny vahiny amin'ny taona rehetra
Nalefa tamin'ny taona 2008, ny marika Grand Pineapple Beach Resort dia manolotra toerana manasa ho an'ny vahiny hankafy ny morontsiraka tsara indrindra any Karaiba.
Grand Pineapple Beach Negril dia miara-miasa amin'ny resahina rehetra miaraka amina toerana amoron-dranomasina tsara ary manome lanja lehibe hanomezana ny vahiny ny tsara indrindra amin'ny zavatra atolotry ny faritra Karaiba - fiarahabana tsy ankasitrahana, serivisy mahafinaritra ary fahafinaretana malalaka sy mahafinaritra morontsiraka fotsy.
Ao amin'ny rojo Exumas any Bahamas, ny Fowl Cay Resort dia manolotra villa tsy miankina iray, roa sy telo ary efitrano fatoriana enina miaraka amina fanaka kanto vita kanto hamenoana ny manodidina manaitra.
Ao amin'ny Fowl Cay, ny zava-drehetra dia tafiditra ao amin'ny vidin'ny Villao, ary avy eo ny sasany. Manomboka amin'ny sakafo sy zava-pisotro mankany amin'ny sarety golf voatokana, mpitsangantsangana amoron-dranomasina, ary koa sambo maotera hanjonoana na hijerena ireo torapasika sy cays mifanila aminy. Ny villa rehetra koa dia manana lakozia feno entana, fitaovana elektronika maoderina, kojakojan'i Molton Brown, ary ny antsipiriany rehetra momba ny trano fialan-tsasatra tena izy
Ny tanànanao Jamaikana
Ny villa tsy miankina amin'ny kapa sy ny morontsiraka dia fanangonana trano efatra amoron-dranomasina mahatalanjona izay misarika ny tena fototr'izany fiainana Jamaikana izany.
Miorina manerana ny nosy, ny trano tsirairay dia samy manana ny mampiavaka azy avy amin'ny hakanton'ny Rio Chico 14 hektara, ka hatrany amin'ny fanintonana moramora an'i Sundown, ary hatramin'ny fialamboly mahafinaritra ao amin'ny Villa Plantana, mankany amin'ny filaminana milamina an'ny Lime Acre, misy zavatra ho an'ny tsirairay ao amin'ity fanangonana trano tsy miankina tena tsara any Jamaika ity.
Misy safidy ho an'ny mpandeha amerikana rehefa misafidy an'i Hawaii na any Karaiba ho toerana fitsangatsanganana. Samy manana tora-pasika mahafinaritra ireo toerana roa ireo, fa raha ny fiainana traikefa azo antoka, tena lafo vidy ary lafo dia lafo avokoa, kapa ary Karaiba ihany no safidy voajanahary.